Isku laabashada alaabta guriga kuma filna marka aad ka hor fursado cusub haysato. La kulan IKEA Home smart, oo ah nidaamka otomatiga guryaha ee shirkadda iswiidhishka ah. Teknolojiyada ayaa dhawaanahan isku dayeysay inay ku guuleysato suuqa, waxaanan raacnaa wadadan oo waxaan ku sharaxeynaa dareemayaal, indhooleyaal iyo aalado kale.
IKEA ayaa dhawaan balaarin doonta aruurinta dadka ku hadla Symfonisk?
Ikea, hadal caqli badan, Sonos, Symfonisk
Wadashaqeynta IKEA iyo Sonos waxaa lagu dhawaaqay 2017. Midhihiisu waa laba ku hadla caqli-wadayaal Symfonisk ah oo isku daraya wax ku oolnimo iyo naqshad cajiib ah Dhanka kale, waxaa jira tilmaamo badan oo muujinaya in soo bandhigida qalabkan ay dhowaan ...
Apple HomeKit, IKEA Home Smart, News, Home smart
Qalabyo badan oo Ikea ah oo leh taageerada HomeKit
19 Febraayo 2021
tufaaxa, Homekit, Ikea
Iyadoo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee albaabkeeda, Ikea ayaa dhowaan soo bandhigi doonta taageerada Apple HomeKit ee laba qalab kale oo taxanaha TRÅDFRI ah. Waxaan ka hadlayaa hotkey iyo dareemayaal dhaqdhaqaaq wireless ah. Cusboonaysiinta qalabka kumbuyuutarka ee lambarka albaabka 1.13.21 ...
IKEA Home Smart, Casharrada
Hordhaca aduunka ee IKEA Smart Home
Ikea, ikea smart home, guriga smart
IKEA sidoo kale waxay leedahay nidaam Smart Home u gaar ah! Fiidiyowgaan waxaan ku siin doonaa hordhac ku saabsan adduunka ee nalalka casriga ah, indhoolayaasha iyo dhawaaqa IKEA.
IKEA Home Smart, dib u eegista
Sensor Motion IKEA - Dib u eegis Video ah
18 Oktoobar 2020
qalabka dhaqdhaqaaqa, Ikea, gurigaa caqli badan
Waqti dib u eegis kale oo usbuuca ah! Waqti loogu talagalay qalab kale oo IKEA ah. Iyo sida ugu badan ee aan ujeclahay wax soo saarkooda, kani ma shaqeyn ... Laakiin faahfaahin dheeraad ah ayaa ku jirta dib u eegista. Soo dhawow!
Khabiirka dhaqdhaqaaqa IKEA - miyey buuxinaysaa himilooyinkeena? Dib u eegis
Aqar, qalabka dhaqdhaqaaqa, Ikea, gurigaa caqli badan
Aaladda qaarkood kaliya aad uma fiicna ... Waad ka heli kartaa arrintaas inta aad tijaabineysid. Nasiib darrose, dareemeha mooshinka ee IKEA ee lagu xusay dib-u-eegistan ayaa u rogay inuu yahay wax soo saar noocan oo kale ah. Muuqaalka Muuqaalka mooshinka IKEA waa mid aad u ...
Apple HomeBridge, Apple HomeKit, FIBARO, Guriga Google, Kaaliyaha Hoyga, IKEA Home Smart, News, furanHAB, Hoyga Xiaomi
Midowga yurub waxay bilaabayaan baaritaan ay ku sameynayaan bay'ada Google, Apple iyo Amazon
Alexa, Kaaliyaha Google, guriga google, Homekit, Suuriya, Midowga yurub
Maamulka ka hortagga argagixisada ayaa bilaabay baaritaan kale oo ka dhan ah kooxda ugu weyn tikniyoolajiyadda. Hawshoodu waa inay hubiyaan bal in cillad deegaan ahaanta ay muujiyaan sababaha hal-abuurnimo. Howsha oo dhan waxaa maareeya Wakiilka Yurub ee Tartanka, Margrethe Vestage. Waxay dooneysaa inay hubto ...